कुश्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल नियमित मर्मतका लागि बन्द — SaharaPati
कुश्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल नियमित मर्मतका लागि बन्द
कुश्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल मर्मतका लागि बन्द भएको छ । नियमित मर्मत गर्न यान्त्रिक पुल बन्द गरिएको हो । मर्मतका लागि अनिश्चितकाल सम्म सेवा बन्द गरिएको कुश्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल लिमिटेडका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । हिजो शुक्रवार देखि पुलको सेवा बन्द गरिएको छ ।
यान्त्रिक पुल बन्द हुँदा सर्वसाधारणहरुले सास्ती पाएका छन् । पर्वतको सदरमुकाम कुश्माबाट बागलुङ नगरपालिका १४ बलेवा सम्म जोडिएको उक्त पुलबाट दैनिक पाँच सय सर्वसाधारणहरु आवातजावत गर्दै आएका छन् । पुलका लठ्ठा १/१ वर्षमा खिईँदै आएकाले परिवर्तन गरिँदै आएको छ । पुल मर्मत गर्न कम्तिमा एकहप्ता लाग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भारतबाट प्राबिधिक र लठ्ठा मगाएर मर्मतको काम थालिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यान्त्रिक पुल बन्द हुँदा सर्वसाधारणहरु एक घण्टाको घुमाउरो बाटो यात्रा गरि बडागाउँ– कैया झोलुङ्गेपुलको प्रयोग गरि आवातजावत गर्न बाध्य भएका छन् । यो पुल दक्षिणी बागलुङका एक दर्जन गाउँका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । पुल हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु समेत आउने गरेका छन् ।
पर्वतमा अहिले मगर महोत्सव र बागलुङको बलेवामा बलेवा महोत्सव चलिरहेको छ । यात्रुहरुको चाप बढिरहेका बेला पुल मर्मतका लागि बन्द भएपछि पुललाई एक हप्तामा १० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो पुल कुश्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल २०६८ सालमा करिब चार करोडको लागतमा बनाईएको हो । एक डब्बामा एक पटकमा आठ जना गरी दुईमा १६ जना मानिस आवातजावत गर्दै आएका छन्
वाह ! यस्ता पाे प्रशाशक : पर्वतका सिडिओ- डिएसपीलाई नागरिक अभिनन्दन
पर्वतमा सांसद गिरीकाे चर्काे आलाेचना, यस्ताे छ रहस्य
राेट्याक पर्वतले भब्यताका साथ मनायो जन्माेत्सव
नवलपरासीका जनप्रतिनिधिले आखिर किन गरे राेट्याक्ट पर्वतको प्रसंसा ? यस्तो छ रहस्य
एक दिने सेयर तालिम कुश्ममा सम्पन्न
पकुवा मा निसुल्क पशु स्वास्थ सिविर सप्पन्न